Vessoft - Software directory – Windows
I-CD & I-DVD nedrayivu ye-USB
Iphakethe Ihhovisi ukusebenza nge imibhalo umbhalo kanye namatafula. It isekela inqwaba ye izakhiwo kanye nemisebenzi esikhundleni Microsoft Office.
IGoogle Earth – isoftware yokubuka umhlaba womhlaba ngokuningiliziwe ngokusekelwa kwezithombe ze-satellite futhi ibonise izinto ezisetshenzisweni ze-3D.
I-iTunes – isidlali esidumile sokudlala kabusha amafayela emidiya. Isoftware isekela ukuvumelanisa idatha phakathi kwekhompyutha yakho nedivayisi ye-Apple.
Ithuluzi for elawulwa kude computer lapho uxhumekile kwi-inthanethi. Kukhona kungenzeka ikholi yevidiyo kanye exchange of amafayela.
Umdlali enamandla ikuvumela ukuba ukudlala iningi takhiwo abezindaba bese usebenzisa ezahlukene audio ukuhlunga futhi video nemiphumela.
Hamachi – isoftware yokudala inethiwekhi yangasese ebonakalayo phakathi kwamakhompyutha nge-inthanethi. Ama-algorithms e-encryption ahlukene asetshenziselwa ukuhlala okuvikelwe kunethiwekhi yendawo.
I odumile umdlalo yesikhulumi inqwaba imidlalo ethandwa izinhlobonhlobo ezihlukene. Isofthiwe kwenza ukuxhumana kanye ukudlala nabanye abadlali ngokusebenzisa internet.
Isofthiwe ukusebenza nge yokugcina izinhlobo ezahlukene. Isofthiwe inikeza ezingeni lelisetulu ifayela zlib futhi luhlanganisa ne wamazwe uhlelo lokusebenza.
IMozilla Firefox – esinye seziphequluli eziholayo ezisekela ubuchwepheshe obusha bewebhu. Isoftware iqukethe izici eziningi zokuhlala okunethezekile kunazo zonke kwi-intanethi.
Ithuluzi professional ukudala uhlanganise amafayela alalelwayo. Isofthiwe lisikisela amathuba ebanzi for DJs abanolwazi nabaculi.
Isofthiwe ukufundisa izingane izimiso eziyisisekelo lwezinhlelo. Isofthiwe isebenzisa interface lula for development elula amaphrojekthi ahlukahlukene.
Umhleli ezinamandla iqoqo amathuluzi ukusebenza ngemifanekiso. Isofthiwe imodi eyolanda nemingcele ezidingekayo imiphumela elikhulu.